Soo Iibso Kareemka Dhirta ee Shiinaha ee Daaweynta Cudurka Boogta ee Afka & Faleebada Afka - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Kareemka Dhirta ee Shiinaha ee Daaweynta Boogta Cudurka ee Afka & Buuxinta Afka
Kareemka Dhirta ee Shiinaha ee Daaweynta Boogta Cudurka ee Afka & Buuxinta Afka gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Lambarka Qaabka: Kareemka Boogta Afka
Nooca Shayga: Kareemka Dhirta Shiinaha
Nooca: Buufinta Daaweynta Boogta
Magaca: Buufin Boogta
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Propolis, licorice, clssanthemos, reexaanta, coral grass, cVitaminum C, borneol, chlorhexidine acetate, biyo.
Astaamaha: Waxay yareysaa xanuunka afka, Afka ayuu nadiifiyaa, wuxuu xakameeyaa neefta xun
Kooxda Ku Haboon: Dadka waaweyn
Isticmaal: Ku buufi wax ka yar 2-3 markiiba
NET: 30ml / dhalo
Nolosha shelf: 24 Bilood
Boogaha afka waxaa badanaa keena fiitamiinada jirka ku yar, cunno xumo, iyo cunto aan caafimaad qabin. Waxay saameyn ku yeelan doontaa nolol maalmeedkeena iyo shaqadeena, waxayna u horseedi doontaa carqalado badan. Markaa waxaan inta badan fiiro gaar ah u leenahay daryeelka maalinlaha ah.
Cuncun, iyo madax xanuun qabow.
Yaree xanuunka, anti-bakteeriyada iyo anti-bararka.
Yaree daalka maskaxda.
Fiiro gaar ah u yeelo nadaafadda afka oo ka fogow dhaawaca xuubka afka.
Joogtee waqti hurdo oo ku filan iskana ilaali daalka badan.
Feejignow nadaafadda afka.
Isticmaal cuntooyinka ay ku jiraan fiitamiinnada.
Ku buufi mashiinka sanka afka aagga ay dhibaatadu saameysey oo si toos ah ugu cadaadi daroogada
Riix 1-2 buufis markasta, 3-4 jeer maalin kasta antibacterial Range, nadiifinta, dayactirka ciridka dhaawacmay iyo xabka afka, urka afka oo nadiif ah.
Markaad isticmaalayso sheygan:
Badeecadani waa badeecad nadaafadeed oo bakteeriyo ah
Waa mamnuuc kuwa xasaasiyadda ku leh sheygan
Ka fogow meel carruur ah.
Xirmada waxaa ka mid ahaa:
1pc x Afka Gargaarka Boogta Gel
Sunta lagu buufiyo geedaha ee daloolka afka ee nabarrada iyo caabuqa cirridka ayaa la gaarsiiyay waqti aad u dheer. Saameynta isticmaalka dib-u-dhiska, ma jiraan wax ur ah, dhadhanka ayaa dhexdhexaad ah.
Buufinta ayaa muuqata oo dabiici ah. Laakiin dhadhanka ma aha wax fiican. Saameyntiisa, illaa aan fahmay.
Awoodda ayaa la buuxiyay nus, ka hor intaas oo dhan waxay ahayd wax sax ah, daaweynta ayaa wanaagsan.
Buufin la helay, urta dhirta, lama soo bixin. Waxaa jiray baakad muddo dheer ku filan, oo ay ka buuxaan maadada loo yaqaan 'horshaw', laakiin sanduuqa ayaa burburay, laakiin balonchik oo daroogada ku jira ayaa habboon.